nezvedu - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
Edza kuva mutungamiri muChina pneumatic indasitiri
BLCH Pneumatic Science uye Technology Co Ltd yakavambwa muna Nyamavhuvhu 2004, iri munzvimbo yeYUEQING yekusimudzira hupfumi maindasitiri. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye24000㎡, Iine mabhesheni mashanu ekugadzira ane anopfuura 300 vashandi. Iyo isiri-yedunhu bhizinesi rinoshanda muR&D, kugadzirwa, kutengesa uye kugadziridzwa kwebasa kwepneumatic zvinoriumba.
Isu ikozvino tinopa mashanu akateedzana pneumatic zvigadzirwa, senge mweya sosi yekurapa, pneumatic fittings, masilinda, solenoid mavharuvhu, PU machubhu uye mweya pfuti, angangoita 100 mamodheru uye zviuru zvinhu pasi rese .we yapfuura ISO 9001: 2015 certification,, ISO 14001: 2015 yekuchengetedzwa kwenzvimbo sisitimu setifiketi uye CE markig yeEU Zvakare isu tiri National High-tech Enterprise, National Standards inosimudzira sangano.
Isu tinogara tichitora "Yakakwira mhando" sechinhu chakakosha kwazvo, zvikamu zvakakosha zvese zvinogadzirwa ne otomatiki kugadzirisa, izvo zvinonyatso kuvimbisa yakagadzikana mhando yezvinhu. isu tinotora nguva yakareba mukuyedza-kwehupenyu-hurefu uye tichiomerera kuti chigadzirwa chega chega chinofanira kuongororwa uye kuyedzwa usati wasununguka Zvichakadaro, "Mushure meSevhisi" ndiko kuzvipira kwedu, nekuti isu tinoziva kuti vatengi vachanyatsonzwisisa maitiro edu ekuzvitarisira uye nekugadzira zvakanyanya uye nekukunda-kukunda mamiriro.
Mumakore apfuura, isu takatumira kune dzimwe nyika dzinopfuura makumi matatu uye towana yakawanda yakanaka mhinduro. Mune ramangwana, isu tinotarisira kuti isu tinogona kushandira pamwe nevazhinji vatengi uye tine mukana wekuve kambani inotungamira pasirese. Tiri kukura pamwe chete newe.
FRL Musangano Wemusangano
Otomatiki Assembly Musangano
Metal Machining Musangano
Robotic Arms Musangano
Pneumatic Fittings Kuedza
Pneumatic Zvigadzirwa Warehosue